Exodus 19 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔsoɛɛ Sinai Bepɔw anim (1-25)
Wɔkae sɛ Israel bɛyɛ ahemman a emufo yɛ asɔfo (5, 6)
Odwiraa ɔman no ho ma wɔkɔɔ Onyankopɔn anim (14, 15)
19 Bere a Israelfo fii Egypt asaase so no, bosome a ɛto so abiɛsa no, saa da no ara na wokoduu Sinai sare so. 2 Wotu fii Refidim+ kɔɔ Sinai sare so, na wɔsoɛe wɔ hɔ. Bepɔw no anim na Israelfo no soɛe.+ 3 Afei Mose foro kɔɔ bepɔw no so kogyinaa nokware Nyankopɔn no anim, na Yehowa frɛɛ no fii bepɔw no so kae sɛ:+ “Ka kyerɛ Yakob fi, na ma Israelfo no aso nte sɛ, 4 ‘Mo ankasa moahu nea mede yɛɛ Egyptfo no;+ mesoaa mo sɛnea ɔkɔre soa ne mma wɔ ne ntaban so de mo baa me nkyɛn.+ 5 Enti sɛ mutie me wɔ biribiara mu na mudi m’apam so a, ɛnde mobɛyɛ m’agyapade titiriw* wɔ aman nyinaa mu,+ efisɛ asaase nyinaa yɛ me dea.+ 6 Na mobɛyɛ ahemman a emufo yɛ asɔfo ne ɔman kronkron ama me.’+ Nsɛm yi na ka kyerɛ Israelfo no.” 7 Enti Mose kɔe, na ɔfrɛɛ ɔman no mu mpanyimfo no de asɛm a Yehowa kae no nyinaa too wɔn anim.+ 8 Ɛnna ɔman no nyinaa boom buae sɛ: “Nea Yehowa aka nyinaa, yɛbɛyɛ.”+ Ntɛm ara, Mose san kɔɔ Yehowa hɔ de asɛm a ɔman no kae no kɔtoo n’anim. 9 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Hwɛ, mɛba wo nkyɛn wɔ omununkum tumm mu na sɛ me ne wo rekasa a, ɔman no ate, na ama wɔagye wo nso adi bere nyinaa.” Ɛnna Mose de asɛm a nkurɔfo no kae no too Yehowa anim. 10 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔ nkurɔfo no nkyɛn kɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɛnnɛ ne ɔkyena wonnwira* wɔn ho, na wɔnhwɛ sɛ wɔbɛhoro wɔn ntaade. 11 Afei wonsiesie wɔn ho mma da a ɛto so abiɛsa no, efisɛ da a ɛto so abiɛsa no Yehowa besian aba Sinai Bepɔw so wɔ ɔman no nyinaa anim. 12 To ɔhye fa bepɔw no ho nyinaa ma nkurɔfo no, na ka kyerɛ wɔn sɛ: ‘Monhwɛ yiye na moamforo amma bepɔw no so, na monhwɛ na moamma ho amfa mo nsa ammɛka. Nea ɔde ne nsa bɛka bepɔw no, wobekum no. 13 Onii a obebu mmara no so no, mma obiara mmfa ne nsa nso no mu, mmom wonsiw no abo anaa wɔntow ade nwɔ no.* Aboa oo, onipa oo, ɔrentena ase.’+ Sɛ wɔte abɛn* nnyigyei a,+ wɔmmra bepɔw no ho.” 14 Afei Mose sian fii bepɔw no so kɔɔ nkurɔfo no nkyɛn, na ofii ase dwiraa ɔman no ho, na wɔhoroo wɔn ntaade.+ 15 Ɛnna ɔka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Munsiesie mo ho mma da a ɛto so abiɛsa no. Ɔbarima biara nhwɛ na ɔne ne yere anna.”* 16 Da a ɛto so abiɛsa no anɔpa no, aprannaa ne anyinam paapaee, na omununkum kusuu+ bɛkataa bepɔw no so, na abɛn bi gyigyei denneennen, na ɔmanfo a wɔwɔ asoɛe hɔ no nyinaa ho popoe.+ 17 Afei Mose de ɔmanfo no fii asoɛe hɔ begyinaa bepɔw no ase sɛ wɔrebehyia nokware Nyankopɔn no. 18 Na wusiw bɛkataa Sinai Bepɔw nyinaa so te sɛ fononoo mu wusiw, efisɛ Yehowa nam ogya mu+ sian baa so, na bepɔw no nyinaa wosowee denneennen.+ 19 Bere a abɛn no ano yɛɛ den paa no, Mose kasae, na nokware Nyankopɔn no de nne kɛse gyee so. 20 Enti Yehowa sian baa Sinai Bepɔw no atifi. Afei Yehowa frɛɛ Mose sɛ ɔmmra bepɔw no so, na Mose foro kɔe.+ 21 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔbɔ nkurɔfo no kɔkɔ sɛ mma wɔnnyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛbɛn Yehowa abɛhwɛ no, anyɛ saa a wɔn mu pii bewuwu. 22 Na asɔfo a wɔba Yehowa anim daa no, ka kyerɛ wɔn sɛ wɔntew wɔn ho, na Yehowa ankum wɔn.”+ 23 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Ɔman no rentumi mma Sinai Bepɔw so, efisɛ woabɔ yɛn kɔkɔ dedaw sɛ, ‘To ɔhye fa bepɔw no ho nyinaa, na yɛ no kronkron.’”+ 24 Nanso Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Si fam kɔ na sɛ woreba a, wo ne Aaron mforo mmra; nanso mma asɔfo no ne ɔman no mmforo mmma Yehowa nkyɛn na wankum wɔn.”+ 25 Enti Mose sian kɔɔ ɔman no nkyɛn kɔbɔɔ wɔn amanneɛ.
^ Anaa “m’agyapade a ɛda me koma so.”
^ Anaa “wɔntew.”
^ Ebia na ɛyɛ agyan na wɔbɛtow awɔ no.
^ Nt., “odwennini abɛn.”
^ Nt., “ɔnhwɛ na wammɛn ɔbea.”